Spotify ga-abịa Apple Watch | Esi m mac
Onye ọ bụla buru ụzọ kụọ, ọ ga-akụ ya ugboro abụọ. Nke a bụ ihe doro anyị anya mgbe anyị hụsịrị ihe niile mere na ngwa maka Apple Watch na eziokwu ga-adị ruo ogologo oge, ee, anyị na-ekwu maka Spotify. Na nke a oge ụfọdụ gara aga na onye nrụpụta Andrew Chang, mepụtara ngwa maka Apple Watch a na-akpọ Spotty na aha ahụ yiri ngwa ahụ n'onwe ya mere ka ndị mmepe nke Spotify wụkwasị na ya. Mgbe nke ahụ mechara, e degharịrị ngwa ahụ Snowy Ma ndị okike nke Spotify tụrụ Chang n'anya nke ukwuu nke na ha kpebiri iso ya rụọ ọrụ iji wepụta ngwa ọhụrụ ahụ ma ugbu a, anyị nwere ike ịnweta ngwa ngwa Spotify na Apple Watch.
Onye Ugwu Snowz kwuru na nkwupụta:
Ndewo onye ọ bụla, daalụ maka ndidi na nghọta gị. Obi dị m ụtọ ịkpọsa na m ga-arụ ọrụ na Spotify iji weta Snowy na Apple Watch dị ka ngwa gọọmentị maka Spotify. Spotify dị ike iOS SDK mere ka o kwe omume ịzụlite Snowy, enweghị m ike ichere iji ihe na ọkwa ọzọ na ọkachamara na ngwaọrụ ndị dị na Spotify. Agbanyeghị na enweghị m ike ịnye atụmatụ ọ bụla nke mgbe ọ ga-adị, ngwa a ga-adịrị ndị ọrụ Apple Watch n'oge na-adịghị anya.
Ya mere na-enweghị a ụbọchị maka nke a kwere omume ukara Spotify ngwa maka Apple Watch, nke doro anya bụ n'ihi ọrụ mbụ mere site Chang, ugbu a ukara ngwa maka nkwojiaka ngwaọrụ nso na-ọkọnọ na niile maka nzọụkwụ mbụ na Spotty. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa gọọmentị nke egwu egwu egwu a na-ewu ewu maka elekere Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Spotify ga-abịa n’oge na-adịghị anya na Apple Watch
iTunes Jikọọ ga-emechi maka awa 8 na Eprel 22
Fọdụ 15 “MacBook Pro Users Report Sound Issues